Ranjisi (Ruvara) - Wikipedia
(Redirected from Ranjisi)
Ranjisi (Chirungu: Orange colour) kana Orenji ruvara ruri pakati peruvara rweHuroro neTsvuku paSipekitiramu (spectrum) rwechiedza chinoonekwa.
Mashizha munguva yeMatsutso.
Ruva remoto - Ruva renyika yedu yeZimbabwe. MuChirungu rinonzi 'flame lily'.
Ruvara rwedenga zuva rakuvira.
Zvinhu zvine ruvara ranjisi zvinosanganisira muchero uyo une ruvara unodanwa zita rimwe, zvimwe zvinhu zvinosanganisira ruvara rwedenga pakuvira kwezuva uye neruvara rwemiti mumwaka wematsutso.
Ruva reruvara rweRanjisi.
2 Vambo rezita
3 Sainzi (Science)
3.1 Madhayi nemaPigimenzi ("karuvara").
3.2 Zvinhu zvakasikwa zveruvara rweranjsi.
Pakutanga munhoroondo yeChishona shoko rekuti "ranjisi" raisavapo, nekuti Mashona waisava neshoko rekusiyanisa ruvara tsvuku neruvara rweranjisi. Saka ese mavara maviri (ranjisi netsvuku) aidanwa kuti tsvuku. Vanhu vaikwanisa kuona mavara nekusiyana kwavo asi nekuti mavara aiiswa muzvikamu, saka vanhu vaimadana nezita rimwe.
Mavara aionekwa muzvikamu zvina: zvitsuku (ranjisi netsvuku), zvitema (nhema, ungu, hute nezerere), zvichena (chena, pfumbu nehuroro) nezvitsvuku futi (zvitsvukutsvuku se; kiwani, indigo, ne vhiore).
MuChirungu, ruvara rweranjisi rwunotumidzwa zita mushure mekuonekwa kwechibereko cheranjisi rakaibva. Shoko rekuti ranjisi muChirungu rinobva kuFurenji Huru (Old French) rekuti "orange", kubva pashoko rekare rekuti muchero, 'pomme d'orange'. Shoko reChifurenji, zvakare, rinobva kuChiitari rekuti arancia, yakavakirwa pa Chiarabhu نارنج (nāranj) yakakweretwa kubva kushoko reChipezhiya (Persian) rekuti naarang iro rakabva wo kushoko reChisaniskiriti (Sanskrit) rekuti नारङ्ग (nāraṅga), iyo inotora kubva kududziro yeshoko reDhiravhidhiyani (Dravidian)).
Muenzano: நரந்தம் / നാരങ്ങ narandam / naranja zvinoreva ranjisi rinovava muChitamiri (Tamil) ne Chimarayaramu (Malayalam).
Shoko rekuti "Orange" rakatanga kushandiswa muChirungu muna-1502 (Chiuru chimwe nemazana mashanu nemaviri), mune rondedzero yezvipfeko zvakatengwa naMargaret Tudor. Kumwe kushandiswa kwekutanga kwakanyorwa kwanga kuri muna-1512 (Chiuru chimwe nemazana mashanu negumi nemaviri), muchido zvino chaiswa kuPabhuriki Rekodhi Ofisi (Public Record Office). Zita renzvimbo "orange" rine vambo (origin) yakasiyana uye harinei neicho cheruvara.
Kuvedzera ruzivo, shoko rekuti "Orange" ndiro rakashandiswa kusika shoko rekuti "Orenji" muchiShona.
Madhayi nemaPigimenzi ("karuvara").Edit
Muenzaniso wesimbi kubva kumugodhi weAseniki (Arsenic) kumaodzanyemba kweRashiya. Opimendi (Orpiment) yakashandiswa kugadzira karuvara (pigment) yeranjisi kubva panguva dzekare muIjipita yekare, Yuropu neChayina. Varoma vaishandisa chicherwa kutengeserana.
Tumeriki (Turmeric) ipoda, yakatanga kushandiswa sedhayi, uye gare gare semushonga nesipaisi (spice) yechikafu chekuChamhembe cheEzhiya (South Asia). Tumeriki inogadzirwa kubva kuchirimwa che-Curcuma longa.
Safuroni (Saffron), inogadzirwa nemaoko akasarudzwa nemaoko eruva reCrocus sativus, inoshandiswa sedhayi uye seSipaisi (spice) yechikafu.
Zvinhu zvakasikwa zveruvara rweranjsi.Edit
Ruvara rweranjisi rwemakarotsi, manhanga, mbatatisi, maranjisi, nemimwe michero nemiriwo zvinobva kukarotinzi (carotenes), rudzi rwe karuvara ke-photosynthetic (pigment). Turuvara (pigments) twunoshandura mwenje wesimba uyo zvinomera zvinotora kubva kuzuva kuita simba remakemikari kukura kwezvirimwa. Ivo makarotinzi anotora zita ravo kubva kumakarotsi. Mashizha ematsutso zvakare anowana ruvara rwavo kubva kukarotinzi. Kana mamiriro ekunze akatendeuka kutonhora uye kugadzirwa kwezerere chlorophyll inomira, iyo orenji vara inosara.
Mamwemakarotsi anemavara hute (pepuru), tsvuku, chena, huroro nehute nhema. Pamberi pezana ramakore rechi 18 (18th Century), makarotsi aibva kuEzhiya aiwanzo kuve ehute (pepuru), nepo iwo aive muYuropu ainge ari machena kana kuti matsvuku.
Makarotsi, manhanga uye mimwe miriwo anowana ruvara rwavo rweranjisi kubva ku karotinzi, akasiyana eiyo photosynthetic pigment, inotora zita rayo kubva kukarotsi.
Muti mumwaka wematsutso.
Makarotsi (ane ruvara rweranjisi uye rwehute).
Ranjisi inowanzoenderana nemwaka wematsutso, pamwe nekukohwa nematsutso mashizha. Maruva, semichero yeranjisi uye miriwo nemashizha ematsutso, tora iwo ruvara kubva kune photosynthetic pigments inonzi Karotinzi (carotenes).
Ruva remoto (flame lily).
Munda wemaPopi (poppies).
Rozi reranjisi. (orange rose)
Dhariya ranjisi (orange dhalia )
Haibhiskasi reranjisi (orange hibiscus)
Deiriri reranjisi (orange daylily)
Bengaru taiga (bengal tiger). Anemuvara runoita seranjisi - asi iranjisi yakati pfavei)
Murazvo ngirozihove (flame angelfish). Centropyge loricula
Dzimwe hove dzerudzi rekuti 'Koi' ane ruvara ranjisi.
Hove inonzi Koi. Koi, ihove inokudzwa muJapani, inowanzo wamumadziva.
Masipaisi anoshandiswa muchikafu mudzinyika dzakaita seAfrica, Ezhiya neMidhu Isiti (Middle East).
Pane zvine ruvara rweranjisi, zvimwe zvakasikwa zvakadaro asi zvimwe zvinotanga serimwe ruvara zvozoshandurwa kuita ruvara rweranjisi.
Mango dzakaibva, dzimwe dzine ruvara rweranjisi.
Nyama yesarumoni (salmon)
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranjisi_(Ruvara)&oldid=86970"
Last edited on 24 Chikumi 2021, at 05:52
This page was last edited on 24 Chikumi 2021, at 05:52.